Juventus Oo 43 sano kadib garaacday Celtic | stn radio	Thursday, November 27th, 2014	Home
Juventus Oo 43 sano kadib garaacday Celtic
Feb 13, 2013 - Aragtiyood	Kooxda Juventus ayaa hal lug la gashay wareega 8da Champions League ka dib markii ay 3-0 ku dubteen kooxda Celtic oo marti loo ahaa lugta hore ee wareega 16ka Champions League inkastoo kooxda reer Scotland ay ciyaarta inteeda badan iska heysatay.
Kooxda Juventus ayaa hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 3aad iyadoo ka faa’ideystay qalad uu sameeyay daafaca Celtic Ambrose kaasoo kubad sarre madax ku celin waayay waxaana qabsaday Alessandro Matri oo shabaqa ku taabtay, laakiin kubada oo xariiqda gudubtay ayay Celtic soo bixiyeen, waxaana helay Marchisio kaasoo si rasmi ah shabaqa u dhex dhigay.
Waxaana goolka si rasmi ah loogu qoray Alessandro Matri madaama kubada ay markii hore dhaaftay xariiqda goolka. Kooxda martida loo ahaa ee Celtic ayaase ciyaarta inteeda badan heysatay qeybtii hore islamarkaana fursado badan abuurtay iyadoo labo fursadood oo fiican uu ka beeniyay kabtanka kooxda Bianconeri Gigi Buffon.
Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay hogaanka ku heysay kooxda martida aheyd ee Juventus. Celtic ayaana qeybta labaad ku soo gashay si la mid ah qeybtii hore iyagoo carcar ahaa islamarkaana cadaadis daran saarayay Juventus kuwaasoo ku tiirsanaa kaliya daafacooda adag oo u babac dhigayay weerarka kooxda reer Scotland.
Waxaana fursad qatar ah daqiiqadii 62aad uu Gigi Buffon ka badbaadiyay Ambrose kaasoo kubad madax ah oo cidna aysan ciriirineyn ku helay ka dib kooner la soo tuuray.
Celtic ayaana cadaadis isdaba joog ah ku sii waday Juventus kuwaasoo difaacooda sii adkeysanayay, islamarkaana Buffon uu badbaadiyay kooner badan oo ay heshay kooxda Celtic iyo fursado kale.
Laakiin weerarkii iyo dadaalkii Celtic waxa uu noqday hal bacaad lagu lisay ka dib markii Juventus ay heshay goolkii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 77aad.
Matri ayaana markaan kubada taabasho fiican ah u dhigay Marchisio kaasoo kubad u qabtay Brown ka hor inta uusan dabamarin goolhaye Foster. Waana gool uu si rasmi ah magaciisa ugu qoray ciyaaryahanka khadka dhexe Marchisio.
Juventus ayaana ciyaarta dhinac u riday ka dib markii ay heleen goolkii 3aad ee ciyaarta daqiiqadii 83aad, Marchisio ayaa kubad ka xoogsaday Celtic ka hor inta uusan u dhigan weeraryahan Vucinic oo si aayar ah u dh
stn Radio waxaa qoray maxamed axmed maxamed honesty